China Outdoor nitarika acrylic signboard mpanamboatra sy mpamatsy |Zhengcheng
Ny mari-pamantarana fivarotana ao amin'ny Jinhu Convenience Store koa dia manaiky ny endriky ny endriky ny loko telo, izay tsotra sy tsara tarehy.Ny vokatra iray manontolo dia mampiasa taratasy acryl nafarana Japoney, izay tsy mora simba sy levona.Famolavolana voaisy tombo-kase tanteraka, tantera-drano ary tsy misy vovoka, mampiasa fantsona patented izahay, mamiratra kokoa ary mitsitsy angovo.
Anaran'ny vokatra: Boaty Acrylic Light Box
Famolavolana rafitra fikojakojana mahay
Ny teknôlôjia fanoloana fantsom-pahazavana mahatsikaiky amin'ny boaty jiro mitsitsy angovo Zhengcheng dia tsy mitaky fitaovana na famongorana ny boaty.Ny fantsona maivana dia azo soloina ao anatin'ny dimy minitra, izay mampihena be ny fahasarotan'ny fikojakojana ary mampihena ny vidin'ny fikojakojana ny famantarana.
Ny orinasanay dia manana orinasa matihanina manana velaran-tany 4,200 metatra toradroa ary boaty maivana efatra mamorona tsipika famokarana.Zhengcheng izao dia manompo marika maherin'ny 100 any Azia ary mamokatra boaty jiro mitsitsy angovo maherin'ny 30.000 metatra isan-taona.
Ny orinasanay manana fitaovana famokarana matihanina, ary manana lasitra famokarana be dia be.Aorian'ny fametrahana ny mpanjifa dia afaka mamokatra betsaka isika.
Fanampin'izany, ny mpiasa dia manana traikefa manankarena sy fahaiza-mamokatra avo lenta.Ny orinasanay dia nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny marika maro, ary manana laza tsara amin'ny indostrian'ny fanaovana famantarana.
Amin'izay fotoana izay ihany koa, manana ny orinasanay manokana izahay, izay mampihena ny asan'ny mpanelanelana, ary mampihena ny vidin'ny fividiananao.
Betsaka ny fivarotana misokatra eny amin'ny zorony, ary ny boaty jiro nentim-paharazana dia tsy dia mora azo ary tsy mety amin'ny fametrahana.Na izany aza, ny boaty maivana Zhengcheng dia azo ampifandraisina amin'ny sitrapony, miaraka amin'ny endrika tsara tarehy sy famantarana mamirapiratra manintona ny mpanjifa.
teo aloha: Famantaran'ny toeram-pivarotana ivelany ho an'ny Chaoshifa
Manaraka: Ministop confortable store boaty famantarana famantarana
Supermarket Signboard, Blister Light Box Signboard, Vacuum Forming Light Box Signboard, Famantarana mirehitra, Pharmacy Signboard, Fanondroana Boaty Jiro ivelany,